inkampani First Bitcoin ezidweliswe Tel Aviv stock exchange - Blockchain News
inkampani First Bitcoin ezidweliswe Tel Aviv stock exchange
Canadian inkampani cryptocurrency imigodi Bitfarms sele sigqityiwe naziphi yayo kwinkampani Tel Aviv-kuluhlu wajika inkampani yemigodi crypto Blockchain Mining Ltd., umemezele yokufayilisha iSunday Tel Aviv Stock Exchange.
IRetirement kudala inkampani lokuqala cryptocurrency njengoko umsebenzi walo ongundoqo ukuba kuluhlu exchange.
Le nkampani zimbini zokuqala babhengeza deal kunye nokudibana isicwangciso uluhlu kwi Tel Aviv Stock Exchange njenge crypto ezijoliswe inkampani-in December 2017, kodwa nayo kokuphicothisiswa evela umlawuli Israeli. ngo March, iinkampani wavakalisa ukuba Israel Securities Authority ukuba lilugqibile kusini na uphando lwalo naziphi.
Bitfarms isebenza izibonelelo ezine kwiphondo Quebec kwaye okwangoku ukwakha iziko yesihlanu computing.
deVere Group uqala cryptocurrency yorhwebo app
amalungelo awodwa omenzi wechiza China blockchain inkqubo yokwabela ukwabelana data amandla
China State Grid Kor ...
Post Previous:Coinsource ke amalungu ATM Bitcoin
Post Next:Mastercard isebenzisa blockchain ukulwa ID ezingamanga